Nepal Auto जनकपुर–जयनगर रेलको ट्र्याकको गति परीक्षण आज गरिदैं - Nepal Auto
जनकपुर–जयनगर रेलको ट्र्याकको गति परीक्षण आज गरिदैं
धनुषा - बहुप्रतिक्षित जनकपुर–जयनगर रेलको आज रेल्वे ट्र्याकको गति परीक्षण गरिने भएको छ ।
उनले भने, ‘ट्र्याक स्पिड परीक्षण रेल सेवा सञ्चालन गर्नुपूर्वको महत्वपूर्ण प्रक्रिया हो । स्पिड परीक्षण गर्दा रेलको स्पिड १२० किमी प्रतिघण्टा हुने भएकाले रेल्वे ट्र्याकमा सुरक्षा महत्वपूर्ण हुन्छ ।’
महाप्रबन्धक भट्टराईले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत आइतवार रेल्वे ट्र्याक वरपरका आम नागरिकलाई ट्र्याकमा मान्छे, गाई, भैँसी चौपाया, साइकल, मोटरसाइकल, बालबच्चा नछाड्न र ट्र्याकबाट दूरी कायम गरिदिन अनुरोध गरेका छन् । उनले परीक्षणका क्रममा ट्र्याक तथा स्टेशनहरुमा पर्याप्त प्रहरी तथा कर्मचारी खटाइने बताए ।
परीक्षणका विषयमा सूचना जारी भइसकेको र अवज्ञा गरी कुनै दूर्घटना भएमा व्यक्ति स्वयं जिम्मेवार हुने र कानूनअनुसार कारवाहीसमेत गरिने महाप्रबन्धक भट्टराईले चेतावनीसमेत दिए ।
उनले जयनगर–जनकपुर–कुर्था खण्डका नागरिकलाई जिम्मेवार भइदिन अनुरोध गरे । उनले जनकपुरबाट भारतको सिमानासम्मको रेल्वे लिकको वरिपरि सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको जानकारी दिए ।
सरकारले जिटुजी (गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट) प्रक्रियामार्फत रू. ८४ करोड ६५ लाख ९५ हजारमा भारतसँग खरीद गरेको दुईओटा रेल गत वर्ष असोज २ गते जनकपुर रेल्वे स्टेशनमा आइपुगेको थियो । अगाडि र पछाडि गुड्न सक्ने सो रेल अहिले जनकपुरको इनर्वा स्टेशनमा सशस्त्र प्रहरीको निगरानीमा पालले छोपेर राखिएको छ । रासस
नेपालमै बनेको यति हेल्मेटको कथा : माग धेरै, उत्पादन थोरै
नेपालमै बनेको हेल्मेट । कुनै हेल्मेटमा बुद्ध र कुनैमा महादेवको तस्बिर छ ।...
नयाँ कार किन्दै हुनुहुन्छ ? मूल्य मात्र सबै कुरा होइन, यी कुरामा दिनुस् ध्यान
तपाई नयाँ कार किन्ने सोचमा हुन सक्नुहुन्छ । यो अवस्थामा कारको मूल्यमा...
सेल्फ र किक दुवैबाट स्टार्ट भएन बाइक ? यसो गरौ
हाल उपलब्ध अधिकांश स्पोर्ट्स बाइकमा सेल्फ स्टार्ट मात्र जडान गरिएको हुन्छ...